चिनी आयातमा मनलाग्दीः मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का
‘अबको ५ महिनामा स्टक चिनी विक्री नभए द्वन्द्व निश्चित’
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | चिनी उद्योगीले आफूहरूसँग रहेको स्टक चिनी विक्री नभए आउँदो सिजनमा किसानको उखु किन्न नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन् ।
सरकार आफैँले चिनी किनेमात्रै भुक्तानीको समस्या सुल्झिने किसानहरुको दाबी छ । मनलाग्दि तरिकाको चिनी आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो समस्या ल्याएको किसानहरुको भनाइ छ ।
सरकारले तोकेकै मूल्यमा चिनी विक्री गर्न आफूहरू तयार रहेको किसानहरुको जिकिर छ ।
कति भयो यस वर्ष उत्पादन ?
यस वर्ष १ लाख ७८ हजार टन चिनी उत्पादन भएकोमा हालसम्म ५४ हजार टन अर्थात ३० प्रतिशतमात्र विक्री भएको नेपाल चिनी उत्पादक संघले जानकारी दियो ।
संघका महासचिव राजेश केडियाले भने ‘खुला सीमाका कारण अवैध चिनी आयातका कारण नेपाली बजारलाई थप २५ हजार टन चिनी भए पुग्नेमा १ लाख २१ हजार टन आयात भइसकेको छ ।’ ‘चिनी भित्रने क्रम अझै जारी भएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ‘हाम्रो चिनी विक्री हुने कहिले ?’ ‘मंसिरमा अर्को क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ, दसैंमा १० हजार टन विक्री होला, बाँकी महिनामा हाम्रो स्टक विक्री हुन सम्भव छैन भने हामीले के आधारमा कहाँबाट पैसा ल्याएर किसानको उखु किन्ने ?’
त्यसैगरी, संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले पनि ५ महिनामै नयाँ सिजन सुरु हुने तर पुरानो स्टक धेरै भएकाले आगामी सिजनमा उद्योग चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधारमा रहेको बताइन् ।
कति छन्, चिनी उद्योग ?
देशभर १३ चिनी उद्योग छन् तर यी उद्योग वर्षमा ४ महिनामात्र सञ्चालनमा आउँछन् । तर, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा रहेका बगास र मोलासिस समेत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
किसानलाई समयमै उखुको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आलोचना बेहोर्दै आएका व्यवसायीले सरकारकै अदूरदर्शीताका कारण उद्योगी, किसान र मुलुकले नै समस्या बेहोर्नुपरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
किसानहरुले सरकारले अनियन्त्रित रूपमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिएकाले स्वदेशी चिनी विक्री नभएको र यसबाट किसानलाई भुक्तानीमा समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल दोब्बर गर्दै ३० प्रतिशत पुर्याए पनि भारतले निकासीमा अनुदान दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य एकदमै घटेका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘अबको ५ महिनामा हामीसँग स्टक भएको चिनी विक्री भएन भने द्वन्द्व निश्चित छ, किसानको उखु हामीले कसरी किन्ने ? हामीले नकिने किसानले कहाँ लगेर बेच्ने ? हामीले उत्पादन गरेर पनि चिनी र मोलासिस कहाँ राख्ने ?’
संघका महासचिव केडियाले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच प्रश्न तेर्साए ।
उत्पादित चिनीसहित खुदो र बगास व्यवस्थापनमा समेत समस्या परिरहेको व्यवसायीको गुनासो बढेको छ ।